Iqela lePikniki elihombisa imixholo kunye nemibono - Ngaphandle
Isitayile nguAlex Mason
Njengomntu ohlala kwisiXeko saseNew York, ndiyazi ngokwam indlela exabiseke ngayo indawo yabucala yangaphandle, ngakumbi ngoku ukuba ukutya kwangaphandle yeyona nto idumileyo kwezentlalo. Kwaye kuba andikabinayo ibhalkhoni , ipatio, okanye ithala ukubiza eyam —Kodwa ndisafuna ukonwabela ukuchitha ixesha ngaphandle nabahlobo ngaphandle kokuvulwa kwendlu yokutyela — ndiziphathe kakuhle kakhulu ekuzenzeni ndisekhaya kwiipaki zedolophu zokutya isidlo sepikiniki kunye neepati. Ewe, oku kufuna ukuba ndibengumqombothi omncinci xa kuziwa ekusetyenzisweni kwemood okoko ukuthuthwa kungena kwi-equation, kodwa leyo yinxalenye yolonwabo. Ndiye ndeza nezikim ezisibhozo eziphathwayo zangaphandle zokuqinisekisa ukuba yonke ipikniki yangaphandle oyibambayo kweli hlobo iziva ingasese, ipaki yoluntu nangona kunjalo.
Nokuba usahleli kamnandi ngaphandle, ukhetha nje ukuthatha inxaxheba kwimozulu, okanye ufuna ukuphosa indibano yangaphandle okanye ipikniki kubahlobo bakho ukuze wonwabe, izimvo zokuhombisa kunye neetemplate ezingezantsi ziphefumlelwe ngumyili iitafile ezibunjiweyo ziya kungqina ukuba unganxiba nayiphi na ibhentshi epakini kunye netafile yepikniki ngezinto ezifanelekileyo kunye nesikimu sokuhombisa. Ukulungele, setha, khetha i-adventure yakho yokutya yokuhombisa, emva koko upakishe ipaskiki yakho ngokufanelekileyo.
Ukuvuselela iTyoty Fruity
Uyilo olwenziwe nguCharlotte Moss
Yonwabela yonke into enelamuni. Ngasentla, ipati yebrunch ebanjwe ngumyili wezinto zangaphakathi UCharlotte Moss I-animated nge-rattan yendawo ehleliweyo kunye neembiza zegadi ezimnandi, iintyatyambo ezingacacanga ezimthubi kwilaphu leetafile eliprintwe ilamuni. Umxube ufunda iklasikhi kunye nokuzonwabisa, ngelixa iipleyiti eziluhlaza ezenziwe ngeplatter zongeza ubugcisa banamhlanje.
Cwangcisa itafile yeCitrus:
Ityityiwe yiLoveshack Fancy
Cinga ngeentyatyambo ezimnandi nezingenatyala, njenge Ipikniki kwilitye elijingayo vibe ngaphandle kwesandi esiphantsi. Unokongeza ezinye iibhabhathane kumxube (ukuba nje zidlulileyo, kunjalo). Ukuchukumisa i-Lace kuya kuyinyusa ngakumbi.
Cwangcisa itafile yezothando:
Iiglasi zewayini eziSiliconeShark Skinzz ingqokelela.com$ 14.99 ngexabiso THENGA NGOKU
Yenziwe nguWendy Owens
Ukuphosa isidlo sangokuhlwa sangaphandle okanye ipikniksi ngongcwalazi? Ukuhlangana ngobusuku basehlotyeni kubetha ngokwahlukileyo kwaye kubiza umoya omoyo, njenge-rustic chateau-meet-mysterious-bayou ambiance eboniswe apha. Yonke into elahlekileyo yi-moss yaseSpain.
Cwangcisa iTafile yoLwaziso:
Uyilo nguKathryn Ireland
Nokuba uyatya Iiglasi kwaye iipepile ezifakiwe okanye ipleyiti yetshizi eyakhiwe kakuhle, imibala yokutshona kwelanga yomxholo weSouthwestern ilungele ukuxhoma kwehlobo. Ubeko kwezinye iingubo zohlobo lwe-sarape kwaye zibandakanya iintyatyambo ezi-hued ezityebileyo kunye ne-mini succulents kwaye zifumene izinto zokumisa i-whitical desert-chic tableware set kunye nelaphu letafile.
Cwangcisa itafile yoMzantsi-ntshona:
Uyilo luka-Ann Koerner
Setha iiwotshi zakho kwixesha lesiqithi ngemibala eqaqambileyo, ubuninzi beempawu zezityalo ezitshisayo, kunye nesitshixo esiphantsi kodwa esijongeka sinika amandla. Ungaya kwiikiti ezipheleleyo eziprintiweyo zasendle, okanye ngokulula uzise ukuchukumisa kweetropiki ngokuhombisa okungaphezulu okufihlakeleyo kolwandle. Kodwa nokuba ukhetha ntoni, qiniseka ukuba iziselo ze-tiki ziyahamba.
Cwangcisa itafile yeTropical:
Uyilo nguLisa Bynon
Ubume bomhlaba obenziwe ngetafile yeceramic kunye neenkuni ezifudumeleyo ezinikezela iziqwenga zidityaniswe kakuhle nomyezo, kunye nokusebenzisa iintyatyambo zasendle (ezityiwayo) kunye nezityalo ezinamanzi kumbindi wetafile ziya kuchukumisa wonke umntu ommemileyo. Ngaba ufuna ukunyusa i-ante yobuhle? Yiza neengqayi zamasoni kunye nevazi ezindala kunye nemiphanda oziva ungabalulekanga kakhulu ngayo ukuba ube negalelo kwimbali.
Cwangcisa iTheyibhile yeFama:
Isongelo setafile yePiknikiAmasiko kaMikel ukutya52.com$ 180.00 THENGA NGOKU Ipikniki epholileyoItheyibhile kaWeston westontable.com$ 575.00 THENGA NGOKU
Ityityiwe nguAlicia Lund
Ingwenkala nguMnyama oMtsha
Ukuba utsaleleke kwizinto eziqaqambileyo nezibhabhayo kodwa uthanda i-pastel ethambileyo kunye neentyatyambo ezimnandi kwiindawo ezilinganayo, phinda wenze le seti yetafile yomkhosi onesibindi ukusuka ku-Alicia Lund we-Cheetah Ngaba umnyama mtsha. Kwaye ulahle umthunzi othile ngesambrela esine-kitschy.
Cwangcisa iTheyibhile yeQela leGadi:
Uyilo lukaLibby Cameron
Nokuba uyi-Connecticut- okanye i-Maine-style style lobster ethembekileyo, umoya omtsha wase-New England uza kuseta umva osecaleni wepikniki ephefumlelweyo. Sithetha nge-oyster kunye ne-shellfish motifs, izikimu zombala wokuthanda izwe, ukuprinta kwesikolo esidala. Mhlawumbi utsiba nje chuddah.
Cwangcisa iTheyibhile eNtsha yaseNgilane:
Iingcamango ezingama-50 ze-Porch eziPhucula ulonwabo lwehlobo
Isibhengezo-Qhubeka nokuFunda apha ngezantsi Uyilo lweeDrayivu ezili-16 zokuqhuba isiBheno sakho seNqanawa
Iishawari zangaphandle kufuneka ubone ukuze ukholelwe
Imibono engama-25 yePhuli yedike yeComfier, yeChicer Lounging Iingcamango zePatio ezi-10 zokuHlala eziPholileyo eMthunzini
Iingcamango ezingama-28 zeDisk zeChic Alfresco Living Iingcinga zePergola eziya kuthi ziHombise eyadini yakho
Igadi yangaphakathi kunye neeNgcebiso zoYilo lweGreenhouse ezivela kwiiNkqubo
13 Umhombiso woMnyango woMbulelo othi 'Wamkelekile'
Le Tote yeWayini iguqula itafile yePikniki
Ikhaya elinxibe iimpahla
Ukunxiba Imibala yeGemstone
Igumbi langaphandle elimangalisayo
Iingcamango ezingama-40 ezimangalisayo zePati yeHlabathi yeHlabathi egqibeleleyo
Iitafile zombulelo weVintage
imibono yasebusuku yeendawo ezincinci
Izimvo zekhekhe lephepha leHalloween
isipho sosuku lwee-valentines
I-4 yoyilo lwangoJulayi
uyihombisa njani indlu yam